अभिभावक र बाल रिकभरी सेवाहरू | पारिवारिक जीवन - पारिवारिक जीवन
यदि तपाईं वा तपाईंको बच्चा पारिवारिक हिंसामा संलग्न भएको छ र चिकित्सीय रिकभरीमा सुरू गर्न चाहनुहुन्छ भने, पारिवारिक जीवनको स्ट्रेंथ २ स्ट्रेंथ प्रोग्राम तपाईंले खोजिरहनु भएको हुन सक्छ। पारिवारिक जीवनका अभिभावक र बाल पुन: प्राप्ति सेवाहरूले तपाईंलाई र तपाईंको बच्चाहरूलाई आघातबाट निको हुन मद्दत गर्न सक्दछन्।
स्ट्रेंथ २ स्ट्रेंथ प्रोग्रामले पारिवारिक हिंसाबाट बचेकाहरूलाई बहु-अनुशासनिक सहयोग प्रदान गर्दछ जुन स after्कट पछि स्थिरताको बिन्दुमा पुगेको छ। जहाँ उपयुक्त छ, कार्यक्रमले यहाँ पहुँच प्रदान गर्दछ: चिकित्सीय हस्तक्षेप व्यवसायी, परिवार थेरापिस्ट, मनोवैज्ञानिक, यौन आक्रमण सल्लाहकार, व्यावसायिक थेरपिस्ट, बाल चिकित्सक र एक साथिय सहयोग समन्वयक। उपचारात्मक हस्तक्षेप चिकित्सकहरूले तपाईंलाई एक आकलन र छोटो उपचार प्रदान गर्नेछ तपाईंलाई र तपाईंको बच्चालाई तपाईंलाई आवश्यक सेवाहरू फेला पार्न मद्दत गर्न।
के म यस कार्यक्रमको लागि योग्य छु?
स्ट्रेंथ २ स्ट्रेंथ प्रोग्राम महत्त्वपूर्ण छ यदि:
तपाईंको बच्चा १२ बर्ष भन्दा कम उमेर भन्दा कम उमेर भन्दा कम उमेर भन्दा कम उमेरको छ
तपाईं पारिवारिक हिंसा, र / वा आघात लक्षणबाट प्रभावित हुनुहुन्छ
तपाईं बाईड प्रायद्वीप क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ, वा काम गर्नुहुन्छ वा खेल्नुहुन्छ
बच्चाहरू र उनीहरूका अभिभावकहरू जो केन्द्रमा आधारित सेवाहरूमा भाग लिन सीमित क्षमता राख्छन्।
तपाईं संकट बाट बाहिर हुनुहुन्छ र आफ्नो आघात मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार हुनुहुन्छ।
तपाइँ सुरू गर्नु अघि, हामी तपाइँको लागि प्रोग्रामिंग ठीक छ भनेर निश्चित गर्न एक स्क्रीनिंग संचालन गर्नेछौं।
कार्यक्रमले कुन सेवाहरू प्रदान गर्दछ?
स्ट्रेंथ २ स्ट्रेंथले तपाईंलाई र तपाईंको बच्चालाई उपचार सेवा प्रदान गर्दछ। हाम्रो सबै सेवाहरू तपाइँलाई र तपाइँको बाल हिंसाको अनुभव र तपाइँको बालबालिकाको अनुभवलाई बुझ्न, व्यवस्थापन र पार गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राख्दछन्।
कार्यक्रमको अंशको रूपमा, तपाइँ र तपाइँको बच्चा:
प्रक्रियाभर थेराप्यूटिक हस्तक्षेप चिकित्सकहरू द्वारा समर्थित हुनुहोस्।
चिकित्सीय हस्तक्षेप चिकित्सकहरूले तपाइँ र तपाइँको बच्चाको लागि उचित उपचार पाउनेछन्।
तपाईंको घर, समुदाय वा पारिवारिक जीवन कार्यालयहरूमा व्यवसायीहरूसँग भेट्नुहोस्, जहाँ जहाँ हस्तक्षेपको लागि सुरक्षित स्थान प्रस्ताव गर्न सकिन्छ।
स्ट्रेंथ २ स्ट्रेंथ प्रोग्रामले तपाईं र तपाईंको बच्चालाई थुप्रै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। यसले मद्दत गर्न सक्छ:
विगतका अनुभवहरूको प्रशोधनमा समर्थन
तपाईं र तपाईंको बच्चालाई सक्षम बनाउनुहोस्
तपाइँको बच्चाको विकासलाई समर्थन गर्नुहोस्
चलिरहेको परिवार जडानको पोषण गर्दै
अभिभावक र बच्चा सम्बन्ध बलियो बनाउनुहोस्
ट्रामा मार्फत प्यारेन्टिंगलाई राम्रोसँग बुझ्न र सामना गर्न शिक्षा र समर्थन
हामी यी सबै कार्यक्रमहरू एक ठाउँमा प्रदान गर्दछौं, वा हामी तपाईंलाई घर वा समुदायमा भ्रमण गर्न सक्दछौं।
हाम्रो थेरापी र परामर्श सेवाहरू बच्चा-अनुकूल तरिकाले वितरित छन्।
शक्ति २ स्ट्रेंन्थ
स्ट्रेंथ २ स्ट्रेंथ हाम्रो क्लाइन्ट-नेतृत्व प्रोग्रामहरू मध्ये एक हो। स्ट्रेंथ २ स्ट्रेंथले आघात, सूचित बच्चा केन्द्रित र व्यक्ति केन्द्रित हस्तक्षेप प्रस्तुत गर्दछ बच्चाहरू र उनीहरूका अभिभावकको लागि, जुन पारिवारिक हिंसाबाट बचेका हुन्छन्। कार्यक्रमले बच्चा र तिनीहरूका अभिभावक, dyadic काम र सामूहिक कार्यको साथ व्यक्तिगत सशक्तीकरण केन्द्रित हस्तक्षेप प्रदान गर्दछ।
यस कार्यक्रमको लागि सिफारिशहरू साझेदार संगठनहरू भए पनि: पारिवारिक जीवन, SECASA, प्रायद्वीप स्वास्थ्य, साल्भेसन आर्मी र राम्रो शेफर्ड आउँछन्।
हाम्रो टोली तपाइँ संग लक्ष्य सेट र एक उपयुक्त समय सीमा मा तपाइँ संग काम गर्नेछ। हामी तपाईंको चिकित्सकद्वारा निर्देशित तपाईंको आफ्नै वेगमा जान्छौं। त्यहाँ संख्यागत सत्रहरू छैनन्।
लचिलो - हामी तपाईलाई तपाईको घरमा, हाम्रो अफिसमा वा सुरक्षित, आरामदायी स्थानमा भेट्न सक्दछौं।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं हामीसँग मूल्यांकनमा पुग्नुहुन्छ। हामीलाई कल गर्नुहोस् (०)) 03 8599 5433 XNUMX वा ईमेल पठाउनुहोस् শক্তি २streight@familyLive.com.au
के तपाइँको साथी वा तपाइँ कसैलाई थाहा छ व्यवहार परिवर्तन संग अतिरिक्त समर्थन को आवश्यकता छ? क्लिक गर्नुहोस् यहाँ हेर्न को लागी यदि उनीहरु हाम्रो अनुरूप समर्थन सेवा को लागी योग्य छन्।
बल गर्न बल, शक्ति2शक्ति